Tengesa pamhepo uchishandisa Mifananidzo | ECommerce nhau
Tengesa online uchishandisa Mifananidzo
Kukura kwe e-commerce kuburikidza nemifananidzo-yakavakirwa pasocial network inokodzera muchikamu chikuru kugona kwavo ivo vashandisi vanogovana uye vanogadzira zvemultimedia zvemukati nezve zvigadzirwa zvavanodya. Kana isu tikawedzera pane izvi vanhu vazhinji vane kamera panharembozha yavo Kwese kwavanoenda, tinoona kukosha kwakaita mifananidzo mifananidzo mune chero chigadzirwa kana sevhisi yatinotengesa.
Zvino, kupfuura nakare kose, ndizvo mutengi anoona nezvekupa chigadzirwa chigadzirwa mufananidzo wacho. Uye shanduko iyi munzira yatinoshamwaridzana nayo nevatengi inogona kutiunzira mabhenefiti akawanda, asi zvakare inotikuvadza. Kana ivo vakagutsikana nechigadzirwa kana sevhisi, ivo vanogona kusarudza kugadzira zvemukati nezvazvo uye voita kuti mifungo yavo izivikanwe.
Asi kwete unzwe kugutsikana vane mukana wakakura wekugadzira zvemukati zvisirizvo uye vanogovana maonero avo zvakanyanya kusimbisa. Nzira chete yekuti mucherechedzo umise meseji yaanoda kuburikidza nenzira imwechete inoshandiswa nemutengi, uye idzi ndidzo Masocial network.
Zvimwe zvese kune vatengesi mune izvi mamiriro akavakirwa pasocial media kutora njodzi uye kushandisa mikana yese mikuru yavanogona kuunza. Vatengi vakabatana kupfuura nakare kose, uye vanotarisira mukana wekutaura nezve zvakaitika kwavari sevatengi pasocial media.
Mhando dzinogona kushandisa izvi kupa ziva zvinopihwa uye kukwidziridzwa kugadzira hukama hutsva nehukama pakati pevatengi nekambani, pamusoro pekukurudzira nekupa mubayiro avo vatengi vanosarudza kuratidza pamasocial network kuti vanofara sei nekutenga chigadzirwa chedu. Iyo inzira inoshanda kwazvo yekuwedzera kuvimbika uye kuwedzera kutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Tengesa online uchishandisa Mifananidzo
Maitiro ekuzvidzivirira kubva kune zvakajairika kuchengetedzeka njodzi
Shopify Bhadhara, imwe nzira yekubhadhara